Rabshadaha Khilaafka qoyska ee dalka India - BBC News Somali
Rabshadaha Khilaafka qoyska ee dalka India
Ugu yaraan mar shanti daqiiqo ee kasta khilaaf qoys oo rabshadeed ayaa la soo sheegaa dalka India, qaybta sharciyan u qeexan cadaawadda seyga ama qaraabada.”
BBC ayaa eegaysa, iyadoo ka faaloonaysa xogta dambiyada, dhagaysanaysana marqaati-kaca dhibanayaasha.
Image caption Xogta dambiyada
"Ninkayga ayaa qolka iigu soo galay, albaabka ayuu xiray. Muusigga ayuu dheereeyay si aan dibedda nalooga maqlin. Wuxuu kadib la soo baxay suunkiisa, oo uu bilaabay in uu i garaaco. Wuxuu karbaash igu waday muddo sodon daqiiqo ah."
Aditi (ma aha magaca runta ah) waxay ka mid tahay dhowr million oo dumar Indian ah oo rabshadahan lagula kacay.
"Iyadoo uu sida yeelayo, ayuu hadana iiga digay in aanan qaylin Karin, hadii kale uu iiga siidarayo. Wuxuu igu garaacayay suunkiisa, gacmihiisa…kadibna in uu i ceejiyo ayuu bilaabay. Aad buu u caraysnaa."
Dhacdada ay Aditi sharaxaadda ka bixinayso waxay dhacday iyadoo 19 sano jirta, hal sano kadib xafladii guurkeeda.
Waxaa markii hore baray saaxiib dhowr bilood ka hor , bilowgiina wuxuu u ekaa ninka aad u wanaagsan, oo soo jiidasho badan oo furfuranna. Balse waqti badan sidaas ma sii ahayn.
"wuxuu noqday nin dayac badan o oaf xun, oo mar kasta I caaya. Balse aabahay wuxuu ahaa aalkoliiste, wuxuuna mar walba garaaci jiray hooyaday. Waxaan dilka u
Aditi waxay ku jirtay noloshaas ilaa bishii April 2012, lix sano kadib markii la guursaday, markii ay saaxiibo ku caawiyeen in ay ka baxsato.
Maanta, waxaas oo dhan way ka gudubtay – waxay u shaqaysaa hay’ad aan dowli ahayn, waxayna isku dayaysaa in ay nolosheeda dib u dhisto.
Hase yeeshee, arinta Aditia ma aha mid cid u gaar ah.
Xogta la hayo waxay muujinaysaa in khlaafka qoyska uu ahaa dambiyada rabshadaha ka dhanka ah dumarka ee dalka India sanad walba muddo sodon sano ah, oo tirado ay mar walba sii kordhaysay.
Khilaafka qoyska rabshadaha la xiriira ma aha kuwo u gaar ah India ee waxa gaarka u ah India ayaa ah dhaqanka ka aamuska ah ee ku aadan arrintan.
Markii Aditi ay hooyadeed ka raadsatay caawinaad, wax naxariis ah kama helin.
“Waxaa jirtay xilliga markii aan tusay jirkayga oo muruxsan, oo aan u sheegay in ninkayga uu I xoogay. Waxay tiri, maxay tahay waxa aad ku hadlayso? Maxay tahay waxa aad ninkaaga ka sheegayso. Waxaad u baahan tahay in aad la noolaato, waa in aad u dulqaadato. Waa in aad samayso wax walba oo guurkaagu ku badbaadayo."
India ayaa soo saartay sharci cusub sanadkii 2005 oo dumarka ka ilaalinaya rabshadaha qoyska, hase yeeshee, kuma guulaysan in uu ka hortago hirarka xadgudubyada sababtoo ah looma adeegsan karo dacwadaha dambiilenimo ee maxkamadaha.
Daraasad ballaaran tii ugu dambaysay ee lagu sameeyo xaaladaha qoyska oo dowladdu maalgaliso, aya in ka badan 54% oo rag ah iyo 51% oo dumar ah ay sheegeen in aysan waxba ka qabin in ninka uu garaaco xaaskiisa hadii aysan xushmaynin reer xiddidkeed, oo ay dayacdo gurigeeda iyo caruurteeda, ama xitaa uu ku garaaci karo waxyaabaha yar yar sida hadii cusbada ay cuntada ku yarayso ama ku badiso.